ကလေးတွေအပြင်ဘက် play လိုက်တဲ့အခါ - မှန်ကန်သောအပြုအမူမိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်း
မည်သည့် mom, သို့မဟုတ်မိဘအုပ်ထိန်း၏သင်တန်းတွင်မဆိုအဖေဖြေဆိုရန်ရှိကြောင်းပုံမှန်ကလေးကမေးခွန်းတစ်ခုကို။ မိုးကြိုးများနှင့်လျှပ်စီးနေတဲ့မိုးကြိုးပစ်၏ပုံမှန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းငါတို့ရှိသမျှသည်အတှေ့အကွုံ - သို့သော် woher အမှန်တကယ်မိုဃ်းချုန်းနှင့်လျှပ်စီးငှါလာသလော
ဒါပေမဲ့ မိုဃ်းချုန်းခြင်းနှင့်လျှပ်စီးရှိရာပြုပါ တကယ်? လျှပ်စစ်အခြေခံအားဖြင့်လျှပ်စစ် discharges ပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ အဆိုပါမိုဃ်းချုန်းအသံလှိုင်းများနှင့်လျှပ်စီး၏ acoustic ဥတုပါဝင်ပါသည်။
အမည်ခံသင်ဟာမိုဃ်းချုန်းသကဲ့သို့, လျှပ်စီးဆင်းနားထောင်ကြလော့။ ဘယ်လိုမိုဃ်းချုန်းနှင့်လျှပ်စီးလာကြဘူး အခြေခံအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲမယ်လို့ဘာကြောင့်မိုဃ်းချုန်းခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ပူလည်းမရှိ။
နွေရာသီမှာတော့နေရောင်မြေပြင်အနီးရှိစိုထိုင်းသောလေထုတွင်စတင်။ ပူနွေးတဲ့လေထုပူဖောင်းသူတို့ပေါ့ပါးကြောင့်ထိပ်မြင့်တက်, ပြီးတော့တစ်နေရာရာမှာမိုဃ်းကောင်းကင်၌အအေးအခြေအနေများအတွက်တက်အဆုံးသတ်။ ကြောင့်ဒီတာဝန်ခံခွဲခြာ (အအေး / ပူ) မှက resoundingly တစ်ဦးကို flash ထဲမှာများလွန်းအားကြီးသောအခါလျှပ်စစ်ဗို့အားကိုတက်ဆော - မိုဃ်းချုန်း! - discharges ။
ဘယ်လိုမိုဃ်းချုန်းနှင့်လျှပ်စီးလာကြဘူး ထို့ကြောင့်ဤဥပဒေရှင်းလင်းမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအမြင့်မှာတင်းမာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ မဟုတ်ရင်လွယ်ကူစွာတစ်ဘီလီယံ Volts အောင်မြင်ဒါဟာလျှပ်စစ်တာဝန်ခံ။ လျှပ်စီး၏ discharges, အားဖြင့်အထိသုံးသောင်းဒီဂရီအပူချိန်ပေါ်ထွန်းနိုင်ပါ။ ဒီအလှည့်လေတွင်စတင်, ကအလွန်လျင်မြန်စွာထို့နောက်အသံလှိုင်းကိုထုတ်ပေးချဲ့ထွင်။
ဟုမေးသောအခါ: ဘယ်လိုမိုဃ်းချုန်းနှင့်လျှပ်စီးလာကြဘူးဒါကြောင့်တဦးတည်းလည်း pent-Up နှင့်ရိနာစွဲဗို့နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ရပ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုရမည်ရမည်ဖြစ်သည်။
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်းမှန်ကန်သောအပြုအမူ တကယ်ဘဝနှင့်သေခြင်းအကြားတခါတရံဆုံးဖြတ်သည်။ အများကြီးအပြင်ဘက် play, ဒါအရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်ရန်သေချာစေပါသူကိုအထူးသဖြင့်ကလေးတွေ။ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းမကြာခဏအံ့သြစရာအဖြစ်လာနှင့်ကလေးများမကြာခဏအချိန်ပေါ်အိမ်ပြန်သွားကြဖို့ဆရာဆရာမတွေကခေါင်းထဲရိုက်ရပင်လျှင်, နောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ပေမယ့်မုန်တိုင်းပိုမိုမြန်ဆန်ကဒီမှာသူတို့တုံ့ပြန်နိုင်သည်ထက်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်။
အခါမုန်တိုင်းမှန်ကန်စွာပြုမူဖို့ဘယ်လို ရှိသလော မည်သည့်ကိစ္စတွင်: အေးဆေးစောင့်ရှောက်လော့။ ဤသည်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်သားသမီးတို့အဘို့, လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထို့နောက်ဖြစ်, တစ်ဦးကျားကန်နိုင်ပါတယ် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်းစနစ်တကျပြုမူရန် နှင့်ထိတ်လန့်ပြေးဖို့မပြုလုပ် headless ။
လျှပ်စီးအများအားဖြင့်ကသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်ရှိ၏အမြင့်ဆုံးအရာဝတ္ထုသို့ရိုက်။ ဒါကြောင့်အရိုးရှင်းဆုံးအုပ်ချုပ်မှုကို: အသေးစားစေ။ ထိုဒေသတွင်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ စသည်တို့ကိုပြင်ပတွင်တပ်ဆင်တစ်ခုတည်းသစ်ပင်, ထမ်းဘိုး, သတ္တုခြံစည်းရိုး, ရှောင်ကြဉ်ပါ ..
သင်၏သားသမီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်းသင့်လျော်သောအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အချိန်ပါစို့
စစ်မှန်သော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်းအပြုအမူ ပွင့်လင်းသောဧရိယာထဲမှာရေတွင်းတစ်တွင်းရှာဖို့နဲ့တစ်ဦးအောက်မှာသို့သွားကြဖို့ဖြစ်သင့်တယ်နိုင်အောင်။ မြေဆီလွှာကျယ်ကျယ်ဘယ်တော့မှခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူထိမိရပါမည်, ခြေ, အကီထိုင်အတွက်အတူတကွအနီးကပ်ဖြစ်ခြေထောက်န်းကျင် squatting နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့လက်နက်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာအချက်: ရေရှောင်ဖယ်! ရေအလွန်ကောင်းစွာလျှပ်စစ်မီးကျင်းပ။ အိုင်ထဲမှာရေကူးနေစဉ်နှင့်ဦးခေါင်းအမြင့်ဆုံးအနေအထားပါ! ထို့ကြောင့်သေချာပေါက်ရေကန်များ, ရေကန်, စီး, စသည်တို့မှထွက်သွား .. ကလေးများထိုလူအပေါင်းတို့သည်ရေကိုကနေဘေးကင်းလုံခြုံအကွာအဝေးလိုအပျကွောငျးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤသူကား သင့်လျော်သောအပြုအမူ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်း။
ကွာပိုမိုနက်ရှိုင်းမုသာမသုံးကြောင်းကျောက်ဆောင်များအကြားကြိုးများနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကနေရှာဖွေနေလက်စွဲ။ သားသမီးများ၏ဆောင်းဦးရာသီတွင်လည်းကြောင့်အလျင်အမြန်အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုမှ၎င်းတို့၏လင်းတ retrieve သင့်ပါတယ် - တောင်မုန်တိုင်း precedes သောလေတိုက်လျှင်, ဆဲဤကဲ့သို့သောစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေပါသည်!
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကာလအတွင်းမှန်ကန်သောအပြုအမူ တော၌ခက်ခဲသည်။ အဲဒီမှာတစ်ဦးကို flash များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတည်နေရာအမည်ရတွေအများကြီး။ တနည်းကား, နက်ရှိုင်းသောကျင်းသို့မဟုတ်သစ်တောဧရိယာများချရှာဖွေနေနှင့်အောက်မှာ, အရပ်ရှည်ရှည်သစ်ပင်များကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သစ်ပင်များအောက်မှာအမိုးအကာမရှာ, ပိုကောင်းတဲ့စောင်ရန်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ကလေးများအဘို့အက Short Story - အဆိုပါမိုးကြိုးပစ်